Mon, Jul 13, 2020 at 6:52am
चिसोका कारण रुघाखोकीले सतायो ? घरमै यसरी गर्न सकिन्छ उपचार
सोमबार, मंसिर २, २०७६ साल
काठमाडौँ, २ मङ्सिर जाडो मौसम सुरु भएसँगै आजभोलि रुघा खोकि र चिसोका कारण आउने समस्याहरु देखा पर्न थालेको छ । मौसम परिवर्तन हुँदा शरीरले विभिन्न प्रतिक्रिया जनाउँछ ।शरीरले प्रतिक्रिया जनाउनु भनेको रुघा,खोकी लाग्नु, नाक बन्द हुँनु घाँटीमा टन्सिल हुनु आदि हो । मौसम परिवर्तनको समयमा सामान्य रुघाखोकी लाग्दा आत्ति हाल्नु पर्दैन । मौसम परिवर्तनको समयमा लाग्ने रुघाखोकीबाट बच्न घरेलु उपाय अपनाउन सक्नुहुन्छ । रुघाखोकी..
जाडोका कारण हार्टअट्याकको जोखिम उच्च, कसरी बच्ने ?
काठमाडौं, मंसिर २ । मुटु संवेदनशील अंग हो । मुटुमा चिसोका कारण संक्रमण बढ्न सक्छ । हाम्रो शरीरले न्यानोपनको खोजिरहेको हुन्छ । जाडोमा चिसो हुने भएकाले धेरैले आफ्नो नियमित व्यायाम नै गर्दैनन् । जाडो मौसममा मुटुसँग सम्बन्धित रोगको जोखिम हुने गरेको छ । अहिले चिसो मौसम सुरु भएका कारण यसबारे जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ । जाडोको समयमा शरीरि निस्क्रिय भएमा हृदयघात अर्थात हार्ट..
९० प्रतिशत रोगबाट बच्न बिहान खालीमा पिउनुहोस् पानी
आईतवार, मंसिर १, २०७६ साल
एजेन्सी, १ मंसिर । खाली पेट पानी खादा स्वास्थ्यमा फाइदा हुने तथ्य सर्वप्रथम जापानमा प्रमाणित भएको हो । प्राय जापानीले बिहान उठ्नेवित्तिकै चार गिलास पानी खान्छन् । पानी खाएको आधा घन्टापछि मात्र ब्रेकफास्ट लिन्छन्। यो वाटर थेरापीले उनीहरुलाई सक्रीय र स्वस्थ रहन मद्दत गरिरहेको छ। खाली पेट पानी खाँदा करिब ९० प्रतिशत रोगबाट बच्न सकिन्छ। यसमा पनि मनतातो पानी उपर्युक्त हुन्छ। मेटाबोलिजमलाई..
‘जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार सचेत छ’
शनिबार, कार्तिक ३०, २०७६ साल
स्याङ्जा, ३० कात्तिक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति सचेत रहेको बताउनुभएको छ । वालिङ अस्पताल भकुण्डे र अन्नपूर्ण अस्पताल पोखराको संयुक्त आयोजनामा आज वालिङमा सञ्चालित एकदिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अर्यालले सरकार जनतालाई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हरसम्भव प्रयासरत रहेको बताउनुभयाने । “जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ स्वास्थ्य बीमा..
यी हुन् जाडोमा खान उपयोगी ५ तरकारी
शुक्रबार, कार्तिक २९, २०७६ साल
काठमाडौं, २९ कात्तिक जाडो मौसम शुरु भएसँगै काठमाडौं उपत्यकासहितका पहाडी जिल्लामा बिहान बेलुका निक्कै जाडोको महशुस हुन थालेको छ । जाडो स्वास्थ्यका हिसावले पनि केहिलाई दु:ख दिने गर्छ भने धेरै जाडो मौसममा रमाउने गर्छन् । आज हामी जाडो मौसममा ज्यानै तताउने र स्वादिलो, स्वास्थ्य बर्द्धक ५ तरकारीका बारेमा जानकारी दिनेछौ । गोलभेँडा गोलभेँडा स्वादमा मात्र नभई स्वास्थ्यका लागिसमेत उत्तिकै प्रभावकारी चिज हो । सबैजसो..
बिहिवार, कार्तिक २८, २०७६ साल
काठमाडौँ, २८ कात्तिक चिकित्सकको साझा छाता सङ्गठन नेपाल चिकित्सक सङ्घको आगामी नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्ष पदमा चिकित्सक लोचन कार्कीले उम्मेदवारी दिनुहुने भएको छ । चिकित्सक कार्की अहिले सङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ । आगामी माघमा सङ्घको नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुँदैछ । लोकतान्त्रिक चिकित्सक सङ्घको आज बसेको बैठकले उहाँलाई सो पदमा उठाउने निर्णय गरेको हो । सङ्घका अध्यक्ष चिकित्सक मुक्तिराम श्रेष्ठसहित पूर्वअध्यक्षहरु चिकित्सक केदारनरसिंह केसी,..
काठमाडौँ, २८ कात्तिक मधुमेहबाट बच्न व्यक्तिले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक भएको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । विश्व मधुमेह दिवसको अवसरमा नेपाल मधुमेह समाज तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी विज्ञले नेपालको शहरी क्षेत्रमा दिनदिनै मधुमेहका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । अस्वस्थ्यकर खानपान, व्यायाम तथा बदलिँदो समयसँगै काम गर्ने जीवनशैलीमा परिवर्तन, स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनाको अभाव, समय..
यि हुन् रायोको साग खानुका ६ फाईदा !
एजेन्सी, २८ कात्तिक । रायोका सागको फाईदा बारे हामीलाई केही थाहा हुदैन र हामीले खालिरहेको जमिनमा रायो फलाएको धेरै ठाउमा देख्नपाईन्छ । रायोको सागले हामीलाई स्वस्थ रहन विभिन्न रोगबाट बच्न धेरै भूमिका खेलेको हुन्छ । रायोको तरकारी खाँदा यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । १. स्मरणशक्ति बढाउँछ उमेर बढ्दै गएपछि दिमागको सम्झने क्षमतामा ह्रास आउन थाल्छ । प्रतिदिन तीन पटक रायोको साग खाएर..
दूध राम्रोसँग नउमाली पिउनुहुन्छ ? क्यान्सर हुन सक्छ
बुधबार, कार्तिक २७, २०७६ साल
काठमाडौँ, २७ कात्तिक धुम्रपान सेवनले मात्रै नभएर दूध पिउनेमा पनि क्यान्सर हुन सक्ने खतरा देखिएको छ । रिपोर्टका अनुसार, लुवासले केही जनावरहरूको अल्ट्रासाउन्ड गरी डाटाबेस तयार पारेको छ । जसमा, भैंसी, गाई लगायतमा पनि क्यान्सर हुने देखिएको छ । बैज्ञानिकहरूले अहिलेसम्म घोडामा पनि क्यान्सर हुने बताइसकेका छन् । रिर्पोटका अनुसार दूधदिने पशुहरूमा क्यान्सरको खतरा देखिएको हो । पशु विज्ञहरूका अनुसार, यी वस्तुहरूको दूध..
डा. गोविन्द केसीले ९औं दिनमा तोडे अनशन, सीमा सुरक्षा र राष्ट्रियतासम्बन्धी शर्त !
मंगलवार, कार्तिक २६, २०७६ साल
काठमाडौं, २६ कार्तिक । वरिष्ठ चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीले आफ्नो १७औँ सत्याग्रह स्थगन गर्नुभएको छ । मङ्गलबार नवौँ दिनमा केसीले आफ्नो सत्याग्रह स्थगन गरेको घोषणा गर्नुभएको हो । डा केसीले डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका–४ बस्ने चार वर्षीय बालक श्रीयान्स जैरुबाट सुन्तलाको जुस खाएर १७औँ अनशन नवौँ दिनमा स्थगन गर्नुभएको हो । “आम नागरिकमा राष्ट्रियताको भावना बलियो हुनु राम्रो हो । तर सत्तामा हुनेहरूले..
नेपालमा नसर्ने रोगबाट ६६% मानिसको मृत्यु, यि हुन् मुख्य कारण
ललितपुर, २६ कात्तिक नेपालमा ६६ प्रतिशत मानिसको मृत्यु नसर्ने रोगबाट हुने गरेको छ । विश्वमा भने ७१ प्रतिशत मानिसको मृत्यु नसर्ने रोगबाट हुने गरेको बताइएको छ । आरामदायी निद्रा अभाव, नकारात्मक सोच, सन्तुलित खानाको अभाव, धुम्रपान र मध्यपानको बढ्दो प्रयोगका कारण विश्वमा ७१ प्रतिशत मानिसको मृत्यु नसर्ने रोगबाट हुने गरेको प्रदेश नं ३ सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । नेपालमा..
यी १० प्रकारका टाउको दुखाइ जुन हुनसक्छन् खतरानक
सोमबार, कार्तिक २५, २०७६ साल
काठमाडौँ, २५ कात्तिक टाउको दुख्नु भनेको आफैंमा रोग होइन। कुनै पनि सामान्य रूघा खोकी र पिनासले पनि टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ । तर आजभोलि टाउको दुख्ने बिरामीहरुको संख्या अस्पतालमा बढेको छ । यसको उपचार सम्भव कति छ भन्नेबारे विज्ञानले अहिलेसम्म कुनै उत्तर दिएको छैन । केही वर्ष यता सिटी स्क्यान, एमआरआइजस्ता उपचार पद्धति पनि प्रयोग हुन थालेका छन् । तैपनि कयौं अवस्थामा टाउको..
बिग्रदै डा. केसीको स्वास्थ्य : सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लान सुझाव
आईतवार, कार्तिक २४, २०७६ साल
काठमाडौँ, २४ कातिक सात दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको डडेल्धुरा अस्पतालले जनाएको छ। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएपछि आइतबार साँझ विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै अस्पतालले सुविधा सम्पन्न ठाउँमा लान सुझाव दिएको छ। अस्पतालमा विज्ञप्तिमा केसीको ब्लड प्रेसर घटेको, मुटुको चाल वृद्धि भएको, रगतमा अक्सिजनको मात्रा घटेको र मिर्गौलामा समस्या देखिएको उल्लेख गरिएको छ। ‘अनसनरत डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन जटिल..
मोबाइलबाट उत्पादित विकीरणबाट कसरी जोगिने ?
काठमाडौँ, २४ कात्तिक फोनबाट निस्कने रेडियोधर्मीहरुले मानिसलाई असर गर्ने बारे वैज्ञानिकहरुले पहिलेदेखीनै खोज गर्दै आएका छन् । फोनबाट निस्कने यस्ता विकीरणहरुले ट्युमर, क्यान्सरजस्ता रोगहरु लाग्ने खतरा हुने बारेमा रिपोर्टहरु बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीले यस्ता रेडियोधर्मीहरुबाट शरीरमा क्यान्सर हुने या नहुने विषयमा खोज गरिरहेको छ । सोसाइटीका अनुसार मोबाइल फोनबाट निस्कने यस्ता धर्मीहरुले मान्छेको शरीरको डिएनएमा खासै परिवर्तन..
डा केसीको समर्थनमा आइतबार सरकारी सवारी साधन नचलाइने, स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै
डडेल्धुरा, कार्तिक २४ चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा.गोविन्द केसीको समर्थनमा डडेल्धुरामा आइतबार सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधन बन्द गरिने भएको छ । बिहान ८ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म सरकारी नम्बरका गाडी र मोटरसाइकल समेत बन्द गरिने नागरिक समाजले जनाएको छ । आइतबार नै मसाल जुलुससमेत आयोजना गरिएको जानकारी छ । डडेल्धुरामा पछिल्लो समय अनसनरत डा केसीको समर्थन तथा जीवन रक्षाका लागि दिनदिनै..
तपाईलाई दिनमा निन्द्रा लाग्छ ? यस्तो छ कारण
शनिबार, कार्तिक २३, २०७६ साल
काठमाडौँ, २३ कात्तिक अनुसन्धानकर्ताका अनुसार दिनको समयका विना कारण धेरै थकाइ लाग्नु र एक घण्टा भन्दा बढी सुत्नु डाइबेटिजको संकेत हुनसक्ने बताएका छन्। अनुसन्धानकर्ताले स्वास्थ्य मानिसलाई दिनको समयमा विना परिश्रम थकाइ नलग्ने र थकान महशुस गर्ने र दिनमा धेरै सुत्ने गर्ने मानिसमा केही स्वास्थ्य खरावी अथवा टाइप टु डाइबेटिज भएको संकेत रहेको बताएका छन्। जापानको टोकियो विश्वविद्यालयले करिब ३ लाख मानिसमा गरेको अध्ययनले..
स्वास्थ्य गम्भिर भएपछि डा. केसीलाई अनसनस्थलबाट अस्पताल लगियो
काठमाडौं, २२ कात्तिक चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विभिन्न माग राख्दै १७ ‍औं पटक अनशनमा बसेका प्रा. डा. गोविन्द केसीलाई अनसनस्थलबाट डढेल्धुरा जिल्ला अस्पताल सारिएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनी अनसन बसेको निजी घरबाट जिल्ला अस्पताल सारिएको हो । डा. केसी कात्तिक १८ गतेदेखि अनसनमा छन् ।..
वीरेन्द्रनगर, २२ कात्तिक कर्णाली प्रदेशमा तीन महिनाको अवधिमा १५ जना नयाँ कुष्ठ रोगी भेटिएका छन् । यो सङ्ख्या गत वर्षको भन्दा बढी हो । कुष्ठ रोग निवारणको घोषणा भए पनि कुष्ठ रोगीको सङ्ख्या बर्सेनि फेला परेका छन् । सुर्खेतस्थित साइनिङ अस्पतालमा आएका बिरामीमध्ये कर्णाली प्रदेशका १४ र अछाम जिल्लाका एक जना कुष्ठ रोगका नयाँ बिरामी फेला परेका हुन् । “विगतका आर्थिक वर्षभन्दा..
स्वाद र पौष्टिकताले भरपुर बदाम कति पोषिलो ?
काठमाडौँ, २१ कात्तिक । जाडो महिना सुरु भए संगै बजारमा बदामको ब्यापार पनी बढ्दो छ। यो समयमा बदाम मिठो हुने मात्र हैन यसका धेरै फाइदै फाइदा छन् । यो खानमा मिठो र पौष्टिक युक्त मात्रै नभएर यसको बिरुवाहरु गाईबस्तुलाई दिन पनि उपयोगी हुने भएकोले यो केवल जरामा फल्ने फल मात्र नभएर सबै उपयोगी हुने गर्छ । सामान्यतयाः बदाम उपोष्ण प्रदेशमा फल्ने एक किसिमको..
करेलाको जुसका फाइदै फाइदा !
एजेन्सी, २० कात्तिक करेलामा कयौँ गुणकारी तत्व हुन्छन् । यसमा आइरन, म्याग्नेसियम, पोटासियम तथा भिटामिनजस्ता पोषक तत्व हुन्छन् । करेला फाइबरयुक्त हुने भएकाले हाम्रो पेटलाई भरेर राख्न वा पाचन प्रक्रियालाई चुस्तदुस्त राख्न पनि यसले सहयोग गर्छ । एउटा अध्ययनअनुसार यसले मोटोपना कम गर्न पनि सहयोग गर्छ । यो त करेलाको कुरा भयो । त्यस्तै राम्रो हुन्छ, करेलाको जुस पनि । यी..
डा. गोविन्द केसीले अनशन बस्न डडेल्धुरा नै रोज्नुको कारण यस्तो छ
जुम्ला, १९ कात्तिक आफ्नो अन्तिम अनशनपछि डा. केसीले आफ्ना माग र सम्झौताहरुबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ‘माग पूरा हुन्छ, ढुक्क हुनुस्’ भन्दै आश्वास्त पारिरहे । तर, सरकारले घुमाईफिराई धोका दिएको अनुभव गरेका डा. केसी अनशनको विकल्प नदेखेर अहिले डडेल्धुरा पुगेका छन् । डा. केसी आफैं मुटुका रोगी छन् । चिकित्सकहरुले औषधि सेवनमा अनियमितता भए वा रोग प्रतिकुल..
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट निर्देशक चयन गर्न दरखास्त आह्वान
काठमाडौँ, १९ कात्तिक । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्देशक पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने भएको छ । यसका लागि आयोगले आज सार्वजानिक सूचना जारी गरी पदमा आवश्यक योग्यता पुगेकालाई दरखास्त आह्वान गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ ले आयोगमा चार निर्देशक पदको व्यवस्था गरेको छ । आयोगको सूचना अनुसार निर्देशक पदमा आफ्नो व्यक्तिगत सोच, वैयक्तिक विवरणसहित यही कात्तिक २१ गतेसम्म विवरण बुझाउन..
सुकुटे दुर्घटना : अझै पाँच घाइते अस्पतालमै, ४१ जना उपचारपछि घर फर्किए
बनेपा, १९ कात्तिक । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–९ सुकुटेमा आइतबार भएको बस दुर्घटनामा परी घाइते भएकामध्ये अझै पाँचको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । दुर्घटनामा परी घाइते भएकामध्ये धुलिखेल र बनेपामा गरी ४९ को उपचार भएको थियो । सो क्रममा धुलिखेलस्थित धुलिखेल सामुदायिक अस्पतालमा उपचाररत ४७ मध्ये चारलाई आइतबार नै थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको र बाँकीको उपचार भइरहेकामा ४१ घाइते उपचारपछि घर..
पोषणसम्बन्धी पाँचौँ विश्व सम्मेलन शुरु, सन अभियान के हो ?
काठमाडौँ, १८ कात्तिक पोषणसम्बन्धी सेवाको विस्तारका लागि पाँचौँ विश्व सम्मेलन आजदेखि यहाँ शुरु भयो । ‘पृथ्वी र मानवजाति दुवैलाई पोषित गर्ने’ नाराका साथ शुरु भएको सो चारदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन दक्षिण एशियामा नै नेपालमा पहिलोपटक आयोजना भएको हो । हरेक दुई वर्षको अन्तरालमा यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने गर्दछ । सम्मेलनलाई कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा जुटेका देशले उच्च महत्वका साथ लिएका छन् ।..
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हो की सामान्य ?
काठमाडौँ, १७ कात्तिक पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाको विषय निकै चर्चाको विषय बनेको छ । २ महिना अगाडि मात्र २ पटकसम्म सिंगापुरमा उपचार गरेर फर्किए पछि पनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सामान्य बन्न सकेको छैन् । तर प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा पटक पटक समस्या देखा पर्दा समेत आम जनतालाई भने आधिकारीक जानकारी गराइएको छैन् । प्रधानमन्त्री ओली देश र जनताकै कार्यकारी प्रमुख अझै..
मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिए ठगी मुद्दा चलाइने
काठमाडौँ, १७ कात्तिक तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजविरुद्ध किटानी उजुरी परेमा ठगी मुद्दामा कारवाही गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तदारुकता देखाएको छ । विभिन्न मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएको आवाज उठिरहेको र कतिपय मेडिकल कलेजले आफूखुशी शुल्क लिन नपाए एमबिबिएसको भर्ना नलिने धम्की दिइरहेका बेला मन्त्रालयले र आयोगले आज सम्बन्धित पीडित पक्षलाई किटानी उजुरी दिन आव्हान..
प्रधानमन्त्री ओली तेस्रोपटक डायलासिस गराउन ग्रान्डी अस्पताल जाँदै
काठमाडौं, कार्तिक १७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी सचिवालयका अनुसार मिर्गौला डायलासिसका लागि अहिले बिहान प्रधानमन्त्री ओली ग्रान्डी अस्पताल जाने तयारी भइरहेको छ । ‘त्यसैले आज बिहान बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि सर्ने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिनाका साथै सरकारको कामलाई प्रभावकारी गराउनेलगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओली डायलासिसका लागि अस्पताल..
यी हुन् कलेजो सफा पार्ने खानेकुरा
काठमाडौँ, १५ कात्तिक अंगुर अंगुरमा भिटामिन सि र एन्टिअक्सिडेन्ट उच्च मात्रामा पाइन्छ, जसले कलेजोलाई प्राकृतिक रुपमा सफा पार्छ। एक गिलास अंगुरको रसले कलेजोलाई विषाक्तमुक्त गर्ने इन्जाइम उत्पादनमा सहयोग गर्छ। प्याज प्याजमा लिभर इन्जाइमलाई सक्रिय बनाउने क्षमता हुन्छ, जसले शरीरमा भएका विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ। यसमा अधिकमात्रामा हुने अलाइसिन र सेलेनियम नामक दुईवटा प्राकृतिक तत्वले कलेजोलाई सफा पार्छन्। चुकन्दर र गाँजर यी दुवैमा बेटा क्यारोटिन..
सिरानी छेउ माेबाइल नराख्नुस्, क्यान्सर हुन्छ !
बिहिवार, कार्तिक १४, २०७६ साल
काठमाडौँ, १४ कात्तिक अहिले मोबाइल बोक्नु हाम्रो बाध्यकारी जीवनशैली जस्तै भइसकेको छ । बेलुकी विस्तारामा होस् या बिहान उठ्ने वित्तिकै हामी मोबाइल चलाउन थालिहाल्छौँ । तर, बेलायतको एक्जिटरलगायतका केही विश्वविद्यालयमा गरेको अध्ययनले सिरानी छेउ मोबाइल राखेर सुत्दा निकै धेरै समस्या आउन सक्ने पत्ता लगाएको छ । अध्ययनअनुसार मोबाइललाई सिरानी छेउ राख्दा क्यान्सरमात्र होइन, नपुंसकता पनि हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्यान्सर रिसर्च एजेन्सीले मोबाइल फोनबाट..
अस्पतालबाट निवास फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आई एम फाईन्’
काठमाडौँ, १४ कात्तिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्यलाभ गरी आज साँझ निवास फर्कनुभएको छ । निवास फर्कने क्रममा उहाँले अस्पताल परिसरमा रहेको सञ्चारकर्मीमाझ आफू ठिक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । अस्पतालबाट फर्कदै गर्दा निकै प्रफुल्ल मुद्रामा देखिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “म ठिक छु ।” निवासतर्फ जाने क्रममा प्रधानमन्त्री ओली एक्लै हिँडेर गाडीसम्म पुग्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले शारीरिक रुपमा आफूलाई स्वस्थ्य महसुस गर्नुभएको उहाँको..
Results 1452: You are at page 15 of 49